Ny OnePlus 7T Pro dia ofisialy izao, lazainay aminao izay rehetra ilainao ho fantatra momba ity modely vaovao | Androidsis
Ignacio Sala | | About us, OnePlus
Tamin'ny faran'ny volana septambra dia nanolotra tamin'ny fomba ofisialy ny OnePlus 7T, ny fivoaran'ny OnePlus 7, terminal iray izay namely ny tsena tokony ho 6 volana lasa izay ary ahafahantsika manisa ny vaovao amin'ny rantsan-tànana ary mbola manana rantsantanana sisa isika. Hizaha ny fanavaozana ny OnePlus 7 Pro, hTsy maintsy niandry isika mandraka ankehitriny.
Ora vitsy lasa izay, natolotry ny orinasa tamin'ny hetsika iray, ny taranaka faharoa an'ny OnePlus 7 Pro, terminal iray izay manintona manokana ny sainy ho an'ny endriny, endrika iray izay toy ny teo alohany ihany, eo alohan'izay ny zava-drehetra ary eo an-tampon'ny fitaovana ny fakan-tsary ary miseho ary manjavona rehefa manokatra ny rindranasa fakantsary izahay.
Tamin'ity taona ity, ny chipmaker Qualcomm, dia nandefa voalohany ny kinova faharoa amin'ny lozisialy voalohany amin'ity taona ity, ny 855, mpikirakira izay misy amin'ireo maodely finday avo lenta farany natolotra. Ny OnePlus 7T sy 7T Pro vaovao dia nanararaotra ity fanavaozana ity ho fanentanana iray hafa raha ny fanavaozana ny fitaovana raha toa ka avy amin'ireo kinova izay natomboka 6 volana lasa izay isika, na dia tsy manjavozavo mihitsy aza ny tsy fitoviana.
Fiovana iray hafa hitantsika ao amin'ny OnePlus 7T Pro dia io Tsy manana afa-tsy dikanay manana RAM 8 GB izahay, raha tokony ho kinova 3 misy capacité RAM hafa (6, 8 ary 12 GB). Fahasamihafana hafa, hitantsika ihany koa amin'ny fitehirizana, tahiry azo alaina amin'ny 256 GB UFS 3.0, amin'ny kinova ihany. Ny OnePlus 7 Pro dia azo alaina amin'ny kinova 128 sy 256 GB fitehirizana ary koa UFS 3.0.
Ao amin'ny fizarana sary, hitantsika ny fomba anaovan'ny orinasa Aziatika dia miloka mitovy amin'ilay andrin-jiro mitovy aminy indray, andiana lantiro mamela antsika hanoratra horonantsary amin'ny 960 fps ho manintona indrindra, ankoatry ny famelana anay hanoratra horonantsary amin'ny 4k. Ny seta fakan-tsary dia misy mason-tsary 48 mpx novokarin'i Sony, masolavitra telephoto 8 mpx ary mason-joro mirefy 16 mpx manana zoro fijery 117º.
Ny efijery an'ny taranaka vaovao an'ny OnePlus 7 Pro Tena mitovy amin'ny hitantsika tamin'ny taranaka teo aloha, efijery amina endrika AMOLED 6,7 santimetatra, miaraka amin'ny famahana 3.120 × 1.440 ary ny tahan'ny famelombelona 90 Hz, iray amin'ireo tanjaky ity terminal ity.
2 Raha fanovana no tadiavinao, ny fanontana McLaren no tadiavinao
3 Fanavaozana isaky ny 6 volana
4 OnePlus 7T Pro daty famoahana
efijery AMOLED 6.67-inch AMOLED 6.67-inch
endrika 19.5: 9 19.5: 9
vahaolana 3.120 × 1.440 90 - Famerenana ny tahan'ny XNUMX Hz 3.120 × 1.440 90 - Famerenana ny tahan'ny XNUMX Hz
processeur Sanpdragon 855 Snapdragon 855 +
Fahatsiarovana RAM 6 / 8 / 12 GB 8 GB
fitehirizana 128 / 256 GB 256 GB
Fakan-tsary mialoha 16 mpx f / 2.0 miaraka amin'ny fanamafisana ny sary 16 mpx f / 2.0 miaraka amin'ny fanamafisana ny sary
Fakan-tsary farany: 48 mpx f / 1.6 48 mpx f / 1.6
Fakan-tsary faharoa faharoa: Telephoto 8 mpx f / 2.4 Telephoto 8 mpx f / 2.4
Fakan-tsary faharoa faharoa: Ny sakany avo indrindra 16 mpx f / 2.2 Ny sakany avo indrindra 16 mpx f / 2.2
fiarovana Mpamaky ny dian-tànana eo ambanin'ny efijery Mpamaky ny dian-tànana eo ambanin'ny efijery
bateria 4.085 mAh miaraka amina fiampangana haingana 4.085 mAh miaraka amina fiampangana haingana
Fiampangana tsy misy tariby No No.
vidiny Manomboka amin'ny 709 euro (fitehirizana 6 GB RAM / 128 GB) 759 euros
Raha fanovana no tadiavinao, ny fanontana McLaren no tadiavinao
OnePlus dia nanolotra fanontana McLaren, fanontana izay tsy mitovy amin'ny kinova mahazatra, tsy amin'ny famolavolana ihany, fa koa amin'ny pitsopitsony omen'ity terminal ity antsika, satria tsy toy ny Pro pro hoe maina, ny fanontana McLaren dia miaraka amina RAM 12GB sy fitehirizana 256GB.
Ny vatan'ity modely ity dia vita amin'ny fibre carbon ary mampiseho amintsika ireo fampandrenesana miandry mba hovakiana amin'ny alàlan'ny jiro manaitra izay aseho eo amin'ny sisin'ny efijery. Ny ambin'ny famaritana an'ity kinova ity dia mitovy tanteraka. Raha te hahazo an'io maodely io dia mila mandoa 859 euro, 100 euro mihoatra ny kinova miaraka amina RAM 8 GB sy fitehirizana 256 GB izahay.
Fanavaozana isaky ny 6 volana
Voamarina indray fa OnePlus manaraka lalana hafa amin'ny mpanamboatra hafa ary amin'ny farany dia mety ho lafo be aminao izany, tsy noho ny maodely fandefasana terminal vaovao isaky ny 6 volana (zavatra iray nataon'i Sony ary toy izany koa) no afaka mandreraka ireo mpampiasa matoky ity mpanamboatra ity (afaka 6 volana ny finday efa nohavaozina) fa satria amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra, toy ny amin'ity tranga ity nefa tsy mandeha lavitra intsony, ny fahasamihafana misy eo amin'ny taranaka taloha sy vaovao dia azo tsinontsinoavina.
Tamin'ity taona ity, OnePlus dia nisafidy ny handefa kinova roa samihafa an'ny OnePlus 7T Pro, iray miaraka aminy RAM 8 GB ary fitehirizana 256 GB ho an'ny 759 euro ary iray hafa, ny fanontana McLaren miaraka amin'i RAM 12 GB ary tahiry 256 GB ho an'ny 859 euro, arak'izany ny fampihenana ireo safidy efa azon'ny mpampiasa teo aloha. Raha maodely hitohy amin'ny ho avy dia miankina amin'ny varotra ny zava-drehetra.
OnePlus dia manolotra drafitra fanavaozana ho antsika mandrisika ny fividianana kinova vaovao an'ny OnePlus, mamela antsika hanavao ny fitaovantsika taloha hatramin'ny OnePlus 6T na marika Xiaomi, Samsung, Sony, Apple, Huawei ary Nokia. Ity programa fanovana ity dia matetika tsy manome lanja tsara ireo fantsona, koa raha tsy maika hanaisotra ny finday avo lenta isika, torohevitra hatrany ny hivarotra azy io amin'ny tanana faharoa.
OnePlus 7T Pro daty famoahana
Ny OnePlus 7T Pro dia hamely ny tsena 17 ho an'ny Oktobra, toy ny OnePlus 7T. Afaka mividy azy mivantana amin'ny tranokala OnePlus ary koa amin'ny Amazon.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ny OnePlus 7T Pro dia ofisialy izao, lazainay aminao izay rehetra ilainao ho fantatra momba ity modely vaovao ity
OPPO Reno Ace: Ny finday misy fiambenana haingana indrindra eto amin'izao tontolo izao